Chii chinonzi inverter yazvino uye ndeyei | Green Renewables
Chii chinonzi inverter yazvino uye ndeyei?
Kana iwe uri kuisa ako ezuva mapaneru iwe uchaziva kuti iwe unoda akati wandei michina kuti zvese zvishande nemazvo. Izvo hazvingori chete nekuisa iyo solar panel uye kumirira zuva kuti riite iro rese basa. Kuti magetsi ashande zvakanaka, iwe uchazoda inverter yemagetsi, pakati pezvimwe zvinhu.
Iwe unoda kuziva here kuti yazvino inverter chii, maitiro ekuiisa uye chii chaicho?
1 Simba inverter musolar energy system
2 Ndeapi magetsi inverter anofanirwa kushandiswa?
3 Yakagadziridzwa wave uye sine wave inverter
4 Vangani vatengesi vandinoda mumba mangu?
5 Zvinokosha parameter
Simba inverter musolar energy system
Simba inverter inoshandiswa kushandura iyo 12 kana 24 volt voltage yemabhatiri (yakananga ikozvino) kuti ishandise imba voltage ye230 volts (kuchinjisa ikozvino). Kana jira rezuva rogadzira magetsi, rinozviita neakananga ikozvino. Ino yazvino haitishandire kuti tishandise mumidziyo yemagetsi yemumba senge materevhizheni, michina yekuwachisa, ovhoni, nezvimwe. Izvo zvinoda kuchinjika zvazvino ne voltage ye 230 volts.
Uye zvakare, iyo yose yekuvhenekesa imba sisitimu inoda kuchinjanisa zvazvino. Iyo inverter inochengetedza zvese izvi kana iyo solar panel yagamuchira simba kubva kuzuva uye yakachengetwa mubhatiri rayo. Inverter yazvino ndeye chimwe chezvinhu zvinoumba kit yezuva Izvo zvatinogona kuwana nawo simba rekuvandudza mumba medu uye kudzikisa kushandiswa kwesimba remafuta.
Tinofanira kurangarira kuti kunwiwa kwesimba rinowedzerwazve kunobatsira kudzikiswa kwemagasi ekupisa mumhepo uye kunotibvumidza kufambira mberi mukushandurwa kwesimba kunoenderana nedecarbonisation na2050.
Kana mwenje yatinoda yakaderera kwazvo uye iine wiring diki, kuiswa kwacho kunogona kuitwa pasina inverter yemagetsi. Iyo ingangobatana yakananga kune bhatiri. Nenzira iyi, dunhu rese remagetsi raizenge richishanda nema12 volts, nepo chete 12 V mababu nemidziyo zvaigona kushandiswa.
Ndeapi magetsi inverter anofanirwa kushandiswa?
Kana tichida kuisa simba rezuva mumba, isu tinofanirwa kuziva zvese zvinhu izvo izvo zvekumisikidza zvinoda kuti zviite mushe. Kune akatiwandei marudzi emagetsi inverter. Kuti usarudze inverter yemagetsi inonyatsokodzera mamiriro edu, unofanirwa kufunga nezvazvo iyo yakatemwa simba uye yepamusoro simba yeiyo inverter.
Simba rezita ndere iro inverter inokwanisa kupa panguva yekushandisa kwese. Ndokunge, inverter inoshanda kwenguva yakareba uye pakuita kwese. Kune rimwe divi, iyo yepamusoro simba ndiyo iyo iyo yazvino inverter inogona kukupa iwe kwenguva ipfupi yenguva. Iri simba repamusoro rinodiwa kana tikashandisa zvimwe zvemagetsi zvine simba kutanga kana kuve nemidziyo ine simba yakati wandei yakavharwa panguva imwe chete.
Zviripachena, kana tikapedza nguva yakawanda tichida simba rakadai, inova inverter haizokwanise kutipa simba ratinoda, uye zvinobva zvangomira kushanda (nenzira yakafanana kusvika iyo "iyo inotungamira svetuka"). Iri simba repamusoro rakakosha kuti tizive mushe kana tichizoshandisa zvishandiso zvemagetsi senge mafiriji, mafiriji, ma mixer, michina yekuwachisa, pombi dzemvura, nezvimwe. Uye akati wandei panguva imwe chete. Sezvo izvi zvishandiso zvichida kusvika katatu simba rakajairika remagetsi, inverter yazvino ichadikanwa kuti itipe isu yepamusoro yepamusoro simba.
Yakagadziridzwa wave uye sine wave inverter
Aya maInverters azvino anongoshandiswa chete kumidziyo yemagetsi iyo isina mota uye zviri nyore. Semuenzaniso, yekuvhenekera, TV, mumhanzi mutambi, nezvimwe. Kune yerudzi urwu rwesimba rakashandurwa wave yazvino inverter inoshandiswa, sezvo ivo vachigadzira yazvino magetsi.
Kune zvakare sine wave inverters. Izvi zvinogadzira iwo mafungu akafanana anogamuchirwa kumba. Iwo anowanzo kuve anodhura kupfuura akachinjwa mafungu emhepo inverters asi ivo vanotipa isu kuwedzera kwakawedzerwa kushandiswa. Inogona zvakare kushandiswa kune zvishandiso zvine zvese zviri nyore uye zvakaoma mota, zvigadzirwa zvemagetsi nevamwe, zvinopa mashandiro akanaka uye kuita kwakanakisa.
Chinhu chakakosha kufunga nezvacho mune inverters zvazvino ndechekuti iwe unogara uchifanira kuremekedza simba iro iro modhi ratakatenga rinokwanisa kupa. Zvikasadaro iyo inverter inogona kuwandisa kana kusashanda sezvazvinofanira.
Vangani vatengesi vandinoda mumba mangu?
Kuti uzive huwandu hweanopinda mainverter aunoda, zvakakosha kuti uzive simba mumawatts ayo mapaneru ezuva anofanirwa kushandura kuti asangane nezvinodiwa nemagetsi. Kana taverengera izvi, huwandu hwemawati hunopatsanurwa nesimba rakakura iro inverter inotsigira, zvichienderana nerudzi.
Semuenzaniso, kana kuiswa kwedu kwemagetsi kune simba rese re950 watts, uye isu takatenga mainverter azvino anosvika mazana maviri nemawati, isu tinoda mainverter mana kuti tikwanise kuvhara izvo simba rekuda uye tigone kushandura zvese zvakanangana nazvino inogadzirwa mumagetsi ezuva kuita simba rekushandisa pamba.
Simba inverter ine akati wandei akakosha ekushandisa maparamende mukushanda kwayo. Izvo zvinotevera:
Zita remagetsi. Iyi ndiyo voltage iyo inofanirwa kuiswa kune ekuisa terminals yeiyo inverter kuitira kuti irege kuzadzikiswa.
Rated simba. Izvo zvataurwa pamusoro. Isimba iro inverter inokwanisa kuendesa zvichiramba (hatifanire kuivhiringidza nesimba repamusoro).
Kuwedzeredza kugona. Uku ndiko kugona kweinverter kuendesa simba rakakwira kupfuura zvarinowanzoita usati waremedza. Izvi zvine chekuita nesimba repamusoro. Ndokunge, iko kugona kweiyo inverter kumira nesimba rakakwira kupfuura zvakajairwa pasina kuwandisa uye kwenguva pfupi.
Waveform. Iyo chiratidzo inowoneka paterminal yeiyo inverter ndiyo inoratidzira ayo waveform uye ayo anoshanda zvakanyanya kukosha emagetsi uye frequency.
Kubudirira. Izvo zvakaenzana nekuidaidza kuita kwako. Izvi zvinoyerwa seperesenti yesimba pane inverter kuburitsa uye kuisa. Uku kugona kunoenderana zvakananga nemamiriro ezvinhu emutoro weiyo inverter. Ndokureva, kwesimba rese rezvigadzirwa zvese zvakavharirwa mukati uye izvo zviri kupedza simba, zvichidyiswa neiye inverter zvine chekuita nesimba ravo rezita. Izvo zvakanyanya zvinoshandiswa zvinoshandiswa kubva kune inverter, iyo inowedzera kushanda kwayo.
Neruzivo urwu iwe unozogona kuziva kuti ndeipi mhando yeazvino inverter iwe yaunoda kupedzisa yako yezuva kit. Kugamuchirwa kune iyo nyika yeinowedzerwazve simba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Photovoltaic Solar Energy » Chii chinonzi inverter yazvino uye ndeyei?
tsananguro inonzwisisika yekutanga kune vasiri-nyanzvi seni,… ..ndatenda zvikuru